चीनका राष्ट्रपति जिनपिङसँग विवाद भएपछि अलिबाबा समूहका मालिक ज्याक मा दुई महिनादेखि बेखबर - Nepalese Times
बाढी पहिरोमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या १०१ पुग्यो, कहाँ कति ? (विवरणसहित)2मिनेट अघि
राजेन्द्र पाण्डे बन्ने भए वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री, शालिकराम जम्मकट्टेलले गरे यस्तो प्रस्ताव ! 1 घण्टा अघि
एकाबिहानै दुःखद् खबरः बाढीका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ८८ पुग्यो, कहाँ कती ? (विवरणसहित) 11 घण्टा अघि
आज राति पनि यी ठाउँमा हिमपातसहित भारी वर्षाको सम्भावना, मौसमविद्ले दिए यस्तो चेतावनी 1 दिन अघि
नेप्लिज संवाददाता २१ पुष २०७७, मंगलवार ०६:४७ (9 महिना अघि) ५८७ जनाले पढ़िसके
काठमाडौं । अलिबाबा समूहका मालिक एवं चीनका अर्बपति ज्याक मा दुई महिनादेखि हराएका छन् । उनी सार्वजनिक रूपमा देखिएका छैनन् । अलिबाबाको माध्यमबाट चीनमा अनलाइन सपिङ सुरु गरेका ज्याक मा चीनका तेस्रो सबैभन्दा धनी व्यक्तिको रुपमा चिनिदै आएका छन् । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भएको वि वादपछि उनी बेपत्ता भएको हुन सक्ने सुरु भएको छ ।
ज्याक माले गत अक्टोबरमा वित्तीय नियम र सरकारी बैंकको विषयमा भाषण दिने क्रममा आलोचना गरेका थिए । उनले यस्ता नियमले व्यापारिक क्षेत्रमा नयाँ केही गर्न चाहनेका लागि दबाउने बताएका थिए । यो भाषणपछि चीनको सत्तारुढ पार्टी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले विरोध गरेको थियो । उनको भाषणलाई पार्टीमाथिको हमला भनिएको थियो । यसपछि उनको व्यापारमा अवरोधहरूसमेत हुन थालेको थियो ।
गत नोभेम्बरमा चिनियाँ अधिकारीहरूले ज्याक माको कम्पनी एन्ट ग्रुपद्वारा जारी गर्न लागेको ३७ अर्ब डलरबराबरको आइपिओलाई पनि रोकेका थिए । वाल स्ट्रिट जर्नलको रिपोर्टअनुसार ज्याक माको एन्ट ग्रुपको आइपिओ रद्द गराउन राष्ट्रपति सी जिनपिङले नै आदेश दिएका थिए । पछि ज्याक मालाई अलिबाबा ग्रुपमाथि जारी अनुसन्धान पूरा नभइन्जेल चीनबाहिर नजान पनि भनिएको थियो । तर, ज्याक माको टेलिभिजन कार्यक्रम ‘अफ्रिका बिजनेस हिरोज’को फाइनल हुनुभन्दा ठीक अघि (नोभेम्बर) देखि सम्पर्कविहीन छन् । यति मात्रै होइन, यस कार्यक्रमबाट उनको फोटोसमेत हटाइएको छ । नयाँपत्रिका दैनिकबाट साभार ।
बाढी पहिरोमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या १०१ पुग्यो, कहाँ कति ? (विवरणसहित)
अल्पमतका मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले ६ दिन सत्ता लम्ब्याउनुको अर्थ के हो ?
एकाएक नेपाली राजनीति तरंगित, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर माओवादीसँग चुनावी तालमेल गर्ने ओलीको प्रस्ताव !